ငါတို့သည်သင်တို့၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် & အရည်အသွေးမှတ်ချက်ရေးပါ
သငျသညျမှုဦးစားပေးလိုလျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်များ Submit နိုင်သလား
မှတ်ချက်များ ၂၄-၇၂ နာရီအတွင်းစတင်ပါ
YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူသည့်နည်းလမ်းများသည် သင့်ချန်နယ်ကို ပိုမိုနာမည်ကြီးလာစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် YouTube သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ၎င်းသည် နှစ်များတစ်လျှောက် ကိန်းဂဏန်းတိုးတက်မှုကို တွေ့ကြုံခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို တင်ခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် အနှစ်သက်ဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Follower အများအပြားကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သော အသုံးပြုသူအများအပြားသည် ၎င်းမှ ငွေရှာခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် YouTube သည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိလာမည်မှာ သေချာပါသည်။ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်သည် အောင်မြင်သော YouTube ချန်နယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ၎င်းမှပိုမိုအကျိုးခံစားခွင့်များရယူရာတွင် ကူညီပေးပါမည်။
အောင်မြင်သော ချန်နယ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် ပထမခြေလှမ်းမှာ ခိုင်မာသော ပရိသတ်အခြေခံကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ YouTube ပေါ်ရှိ စာရင်းသွင်းသူများဟု လူသိများသော ပရိသတ်များသည် ဗီဒီယိုများကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းများထံ ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့် သင့်ချန်နယ်ကို ပိုမိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ချန်နယ်ကို လူကြိုက်များလာစေလိုပါက သင်၏စာရင်းသွင်းသူအခြေခံနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် အရေးကြီးပါသည်။ မှတ်ချက်များသည် သင့်ချန်နယ်၏အောင်မြင်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် YouTube မှတ်ချက်များကိုဝယ်ယူပါ YTpals မှ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် သင့်စာရင်းသွင်းသူများကို ချိတ်ဆက်ရန် အောက်ပါဗျူဟာများကို အသုံးပြုပါ။
ထိရောက်သော မှတ်ချက်ရေးနည်းဗျူဟာ၏ အရေးပါမှုကား အဘယ်နည်း။
YouTube သည် ဗီဒီယိုများကြည့်ရန်သာမကဘဲ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင်လည်း လူအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များသည် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည် ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအား ၎င်းတို့၏စာရင်းသွင်းသူများပြောသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ပြောသည့်အကြောင်းအရာကို နားထောင်နိုင်စေပါသည်။ YouTube ရှိ မှတ်ချက်ကဏ္ဍသည် ပရိသတ်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရာတွင် ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များ ပိုများသော ဗီဒီယိုများသည် ကြည့်ရှုမှု ပိုများသည်။ မှတ်ချက်ပေါင်း 5,000 ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ဗီဒီယိုအများစုသည် ကြည့်ရှုမှု 1 သန်းဝန်းကျင်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်ခုတိုးလာခြင်းက အခြားတစ်ခုတိုးလာခြင်းကြောင့် အမြင်များနှင့် မှတ်ချက်များသည် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတတ်သည်။
YouTube ချန်နယ်တစ်ခုကို စတင်သောအခါတွင်၊ အဓိကပန်းတိုင်မှာ ပလပ်ဖောင်းတစ်လျှောက်တွင် သင်၏မြင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များသည် မြင်နိုင်စွမ်းကို တိုးလာစေရန်အတွက် မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များသည် ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကို ကြည့်ရှုရန်၊ ဗီဒီယိုကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့၏မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေရန် ကြည့်ရှုသူများကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထိရောက်သော မှတ်ချက်များ မဟာဗျူဟာသည် ကြည့်ရှုမှုများရရှိရန်အတွက်သာ အရေးကြီးသည်သာမက ကြည့်ရှုသူများကိုလည်း သင့်အကြောင်းအရာကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန် လမ်းညွှန်ပေးရန်အတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ကောင်းမွန်သော မှတ်ချက်ဗျူဟာတစ်ခုသည် သင့်ချန်နယ်မှတစ်ဆင့် သင်ပေးပို့လိုသော မက်ဆေ့ချ်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်စေပါသည်။
သင့် YouTube ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်များ ပိုမိုရရှိစေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာများ
သင့်ကြည့်ရှုသူများထံမှ တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ချက်ရယူရန်နှင့် သင့်ဗီဒီယိုများတစ်ဝိုက်တွင် စကားဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုပါက မှတ်ချက်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည်။ ထိရောက်သော မှတ်ချက်ဗျူဟာတစ်ခု၏ အရေးပါမှုကို ယခု သင်နားလည်ပြီး၊ သင့်ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်များပိုမိုရရှိစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ သင့်ကိုယ်ပိုင် မှတ်ချက်များ ဗျူဟာကို ဖော်ဆောင်ရန် ဤနည်းလမ်းများကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် YouTube မှတ်ချက်များကိုလည်း သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
1. ဗီဒီယိုများ၏အဆုံးတွင် မေးခွန်းများမေးပါ။
ဗီဒီယိုများအဆုံးတွင် သင့်ကြည့်ရှုသူများထံမှ မေးခွန်းအချို့မေးရန် အမြဲကြိုးစားသင့်သည်။ ဤမေးခွန်းများသည် အဆုံးအစမဲ့မေးခွန်းများဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကြည့်ရှုသူများအား မှတ်ချက်ပေးရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် သီးခြားမေးခွန်းများသည် ဤကိစ္စတွင် သင့်အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အကြောင်းအရာသည် ကျူတိုရီရယ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါက၊ ကြည့်ရှုသူများအား ၎င်းတို့သည် အကြံပြုချက်များကို အသုံးဝင်သည်ဖြစ်စေ မတွေ့ရှိပါက မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကြည့်ရှုသူများအား ၎င်းတို့မြင်လိုသော အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် အာမခံချက်ရှိသော တုံ့ပြန်မှုများကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အနာဂတ်ဗီဒီယိုများအတွက် ကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်အချို့ကို ရရှိစေရုံသာမက သင့်စာရင်းသွင်းသူများထံသို့လည်း ပိုမိုကိုယ်ပိုင်အဆင့်ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ပထမဆုံး မှတ်ချက်ရေးပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်နောက်လိုက်များအား မှတ်ချက်များ များများတင်ရန် အားပေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်ကိုယ်တိုင် ပထမဆုံးမှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဦးဆောင်နိုင်ပြီး စာရင်းသွင်းသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး ဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်သည့် စကားစမြည်ပြောဆိုမှုကို စတင်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သင့်စာရင်းသွင်းသူများသည် သင့်ဗီဒီယိုများကို မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဆင်ပြေလာပါမည်။ တူညီသောနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ သင်ကိုယ်တိုင်သိသော တစ်စုံတစ်ဦးအား မှတ်ချက်တစ်ခု ထားခဲ့ရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမှတ်ချက်နည်းဗျူဟာသည်လည်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုမှ တင်ထားသော မှတ်ချက်များသည် စာရင်းသွင်းသူများကိုလည်း မှတ်ချက်များ ထပ်မံတင်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆက်ဆံနိုင်သော ရင်းနှီးသောအသိုင်းအဝိုင်းကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3. ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို နားလည်ရန် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သော အကြောင်းအရာများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
မည်သည့်ဗီဒီယိုများ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် YouTube ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ပိုမိုကြီးမားသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည့် အကြောင်းရင်းများကို သင်သေချာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို၏ အရှည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အချို့သော အစီအစဉ်များ။2မိနစ်ထက်တိုသော ဗီဒီယိုများသည်5မိနစ်ကြာ ဗီဒီယိုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်း ပိုများကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သင့်ဗီဒီယိုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့ကို သင့်ဗီဒီယိုအသစ်တွင် ပုံတူပွားနိုင်သည်။ ဒါက ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး မှတ်ချက်တွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
4. YouTube တွင် ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပပါ။
Instagram နှင့် Facebook ပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့ပင် သင့်ချန်နယ်အတွက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးရန် YouTube တွင်လည်း ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပနိုင်သည်။ YouTube ပြိုင်ပွဲများသည် သင့်ဗီဒီယိုပေါ်ရှိ မှတ်ချက်များ၊ စာရင်းသွင်းသူများနှင့် လိုက်ခ်များကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ရယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည် အပိုရံပုံငွေအချို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို မြှင့်တင်ရန် များစွာသော အားထုတ်မှု ပမာဏကိုလည်း ထားရမည်ဖြစ်သည်။ YouTube ပြိုင်ပွဲများသည် သင့်ချန်နယ်ကို အာရုံစိုက်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေရှည်တွင် သင့်ဗီဒီယိုများအပေါ် မှတ်ချက်များ ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သင့်ကြည့်ရှုသူများကို မှတ်ချက်များတင်ရန်လည်း အားပေးနိုင်သည်။
5. စာရင်းသွင်းသူများ၏ မှတ်ချက်များကို နှလုံးသွင်းပါ။
သင့်ဗီဒီယိုများအောက်တွင် ၎င်းတို့တင်ထားသော မှတ်ချက်များကို သဘောကျခြင်းဖြင့် သင့်စာရင်းသွင်းသူနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်တစ်ခုကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအခါ ကြည့်ရှုသူများသည် ၎င်းဘေးရှိ သင့်ချန်နယ်၏ အိုင်ကွန်ငယ်တစ်ခုနှင့်အတူ အနီရောင်နှလုံးသားကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်ရေးသူသည် ၎င်းတို့၏မှတ်ချက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း အကြောင်းကြားချက်ကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်အား မှတ်ချက်များတွင် အခြားသူများနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သည်ကို တွေ့ပါက၊ ၎င်းတို့သည် မှတ်ချက်များ ထပ်မံတင်ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ပရိသတ်၏သစ္စာစောင့်သိမှုကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကြည့်ရှုသူများကိုလည်း သင်တန်ဖိုးထားကြောင်း ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6. မှတ်ချက်အချို့ကို ပင်ထိုးပါ။
ပင်ထိုးခြင်းသည် အချို့သောမှတ်ချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်ထိုးထားသောမှတ်ချက်သည် သင့်ဗီဒီယို၏အောက်ရှိ ကြည့်ရှုသူများ မှတ်ချက်ကဏ္ဍကို အောက်သို့ဆင်းသွားသည့်အခါ ပထမဆုံးမှတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ကြည့်ရှုသူများနှင့် စကားစမြည်စတင်ရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်ကို ပင်ထိုးနိုင်သည် သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းသူများ၏မှတ်ချက်ကို ပင်ထိုးနိုင်ပါသည်။ Pinning feature သည်-
ပရိသတ်ဆီက တိကျတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးတယ်။
ဗီဒီယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်ပေးတယ်။
အီစတာကြက်ဥတစ်လုံး သို့မဟုတ် တိကျသောတိုးတက်မှုအချို့ဖြင့် ပရိသတ်ကို နောက်ပြောင်ခြင်း။
ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုအားပေးကြသော ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စာရင်းသွင်းသူများထံမှ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ချက်များကို အသားပေးဖော်ပြပါ။
7 ။ ပါဝင်
YouTube ပေါ်ရှိ နာမည်ကြီး ချန်နယ်များထဲမှ တစ်ခုခုကို ကြည့်ရှုပါက ၎င်းတို့တွင် တူညီသောအရာတစ်ခု - ညီညွတ်မှုကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင့်ချန်နယ်အတွက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးရန်အတွက်၊ သင်သည် အမြဲတစေ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ဗီဒီယိုများကို မကြာခဏ ထုတ်ဝေရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကို အပ်လုဒ်လုပ်မည့်အချိန်ကို ကြည့်ရှုသူများသိရှိနိုင်စေရန် တင်းကျပ်သောအချိန်ဇယားကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် ၎င်းကိုထောက်၍ အကြောင်းအရာကို ဖယ်ထုတ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သင့်အချိန်ဇယားသည် အပတ်စဉ် ဗီဒီယိုတစ်ကားကို တင်ပေးနေသော်လည်း၊ အကြောင်းအရာကို ပရိသတ်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ဗီဒီယိုများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရှိပါက၊ မှတ်ချက်များ ဆက်လက်တင်ပါမည်။
8. တစ် ဦး CTA ပါဝင်သည်
ဗီဒီယိုတိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုချက် (CTA) ထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ အစ၊ အလယ် အဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယိုရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှာမဆို ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ CTA ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သင့်ချန်နယ်သို့ စာရင်းသွင်းရန် လူများကို တောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များပေးသည့်အင်္ဂါရပ်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် အကွက်ငယ်တစ်ခုထားရှိကာ သင့်ကြည့်ရှုသူများကို သင့်ချန်နယ်သို့စာရင်းသွင်းရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် CTA ကို အခါအားလျော်စွာ မြင်သောအခါ၊ သင့်ချန်နယ်သို့ စာရင်းသွင်းရန် သတိပေးပါမည်။ စာရင်းသွင်းသူများ ရရှိသည်နှင့်အမျှ သင့်ဗီဒီယိုများအတွက် မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်ခ်များသည် အလိုအလျောက် တိုးလာပါမည်။
9. သင့်ဘလော့ဂ်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် YouTube Widget ကို အသုံးပြုပါ။
သင့် YouTube ချန်နယ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို တွန်းအားပေးရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ သင့်ဘလော့ဂ် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်တွင် YouTube widget တစ်ခုထားခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ သင်၏ ဘလော့ဂ်နောက်လိုက်များနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် သင်၏ YouTube ချန်နယ်အကြောင်း သိလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် YouTube widget သည် စာရင်းသွင်းသူအသစ်များကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အကြောင်းအရာကို အခြားမီဒီယာများတွင် လိုက်နာပါက၊ ၎င်းတို့သည် သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုလည်း စာရင်းသွင်းရန် အလားအလာ ပိုများပါသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ YouTube ချန်နယ်တွင် မှတ်ချက်များ ရေးတင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်တွင် သင်နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် အခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းသွင်းသူတစ်ဦးသည် သင့်ချန်နယ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် အခြားဆက်စပ်ချန်နယ်များကို ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ YouTube သည် ဖန်တီးရှင်များအား အကြံပြုချက်စာမျက်နှာသို့ အခြား YouTubers ချန်နယ်များကို ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ ထိုနည်းအတူ၊ ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ချန်နယ်ကို စာရင်းသွင်းရန် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်ချန်နယ်ကို အကြံပြုချက်များစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြရန် အခြားဆက်စပ်ချန်နယ်များကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် သင့်ချန်နယ်အတွက် ကြည့်ရှုမှုများ၊ စာရင်းသွင်းသူများနှင့် မှတ်ချက်များ ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
11. စာရင်းသွင်းသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံပါ။
သင့်စာရင်းသွင်းသူများ၏မှတ်ချက်များကို ပြန်ကြားခြင်းသည် မှတ်ချက်များပိုမိုရရှိစေမည့် ထင်ရှားသောဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများ၏ မှတ်ချက်များကို သင် ဖြေကြားသည့်အခါ ၎င်းတို့ကို နားထောင်နေကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်များကို သင်စိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ရန် နေ့စဉ် မိနစ်အနည်းငယ် အချိန်ယူသင့်သည်။ သင့်ချန်နယ်ကို မှတ်ချက်ပေးခြင်းအပြင်၊ အခြားဆက်စပ်ချန်နယ်များ၏ မှတ်ချက်ကဏ္ဍများတွင်လည်း ကြည့်ရှုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကြည့်ရှုသူများသည် သင့်မှတ်ချက်များကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့မြင်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် သင့်ပရိုဖိုင်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် စာရင်းသွင်းသူအသစ်များ ရရှိနိုင်သည်။
12. သော့ချက်စကားလုံးများကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုပါ။
သင့် YouTube ချန်နယ်တွင် မှန်ကန်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးလိုပါက ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် အဓိကစကားလုံးများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လူတစ်ဦးသည် သီးခြားအရာတစ်ခုကို ရှာဖွေနေချိန်တွင် သော့ချက်စကားလုံးများကို အသုံးပြုသည်။ မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကို သင်အသုံးပြုပါက သင့်ဗီဒီယိုများသည် မှန်ကန်သောကြည့်ရှုသူထံရောက်ရှိနိုင်ခြေ တိုးလာပါသည်။ ချန်နယ်တစ်ခုရှိ စာရင်းသွင်းသူအသစ်များ၏ 60% ကျော်သည် များသောအားဖြင့် YouTube ရှာဖွေမှုရွေးချယ်မှုမှ လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးမပြုပါက သို့မဟုတ် သင့်သော့ချက်စာလုံးများသည် ပါးလွှာသွားပါက၊ သင့်ဗီဒီယိုများသည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးများ တဂ်များဖန်တီးရာတွင် တတ်နိုင်သမျှ သရုပ်ဖော်ရန် အရေးကြီးသည်။ သော့ချက်စကားလုံးများအတွက် အကြံပြုချက်များကို ရှာဖွေရန် အွန်လိုင်းတူးလ်များကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်ချန်နယ်ကို YouTube တွင်သာမက ၎င်းအပြင်ပြင်ပတွင်လည်း ကြော်ငြာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် သင့် YouTube ချန်နယ်ကို မတူညီသော ကြားခံများမှ ကြည့်ရှုသူများကို ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကို စတင်လိုက်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် သင့်ဗီဒီယိုများကို မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့် လိုက်ခ်လုပ်ခြင်းများလည်း ပြုလုပ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့သည် သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်သော နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်-
သင့်လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများတွင် သင့် YouTube ချန်နယ်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
YouTube ချန်နယ်ကို လူမှုစာညှပ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ပေးပို့ပါ။
ချန်နယ်ကို ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့ ထည့်ပါ။
မေးလ်စာရင်းများတွင် သင်၏ YouTube ချန်နယ်သို့ လင့်ခ်ကို ပူးတွဲပါ။
ဘလော့ဂ်များတွင် မှတ်ချက်များတင်သည့်အခါနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော သင့် YouTube URL ကို အသုံးပြုပါ။
14. သင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ပုံသေးများကို အသုံးပြုပါ။
စာရင်းသွင်းသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်လိုပါက သင်၏ ပုံသေးများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ပုံသေးကို တွေ့ရှိပါက လူများသည် သင့်ဗီဒီယိုကို ကလစ်နှိပ်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် သင်၏ပုံသေးအဖြစ် clickbait ပုံများကို စတင်အသုံးပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ clickbait နည်းဗျူဟာကို သင်အသုံးပြုပါက ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ချန်နယ်ကို လိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ပုံသေးကို ထည့်သွင်းခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်လက်ခံရရှိသော ကြည့်ရှုမှုများကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများကို အကြောင်းအရာကောင်းများ ပေးစွမ်းနိုင်လျှင် ကြည့်ရှုမှုများသည် မှတ်ချက်များနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
15. သင့်မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်ခြင်း၏ အင်္ဂါရပ်အသစ်ကို အသုံးပြုပါ။
YouTube Studio (ဒက်စ်တော့) တွင် အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုက သင့်ချန်နယ်ရှိ မှတ်ချက်များကို စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ သီးခြားမှတ်ချက်များအတွက် ရှာဖွေရန်နှင့် ရှာဖွေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ၎င်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည် -
ချန်နယ်၏ အဖွဲ့ဝင်၏ အခြေအနေ။
မှတ်ချက်ပေးသူ၏ စာရင်းသွင်းသူ နံပါတ်။
သင်သည် သီးခြားမေးခွန်းများပါရှိသည့် မှတ်ချက်များကို ကြည့်ရှုရန် စစ်ထုတ်မှုကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ တုံ့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင်၊ သင်ရှိသည် သို့မဟုတ် မတုံ့ပြန်ရသေးသောမှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဤအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည် YTpals ထံမှ YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။ အချို့သော ကြည့်ရှုသူများသည် မှတ်ချက်များမပါသော ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်များတင်ရန် အစပိုင်းတွင် တုံ့ဆိုင်းနေနိုင်သောကြောင့် YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ YouTube ခရီးကို စတင်လိုက်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ မဟာဗျူဟာများကို သင်အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင့်အား ကူညီပေးရန် YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် တည်ထောင်ထားသောအကောင့်များအတွက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
YouTube မှတ်ချက်များကို အဘယ်ကြောင့် ဝယ်ယူသင့်သနည်း။
ယခု သင့်ချန်နယ်ရှိ မှတ်ချက်အရေအတွက် တိုးစေမည့် နည်းဗျူဟာများကို သင်ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် YouTube မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ကြည့်ရှုရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာကာ YouTube ကဲ့သို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ကျော်ကြားမှုရရှိရန် ခက်ခဲလာသည်။ အကြောင်းမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသော နာမည်ကြီးများစွာသည် အကြောင်းအရာဖန်တီးရန် YouTube ကဲ့သို့ ပလပ်ဖောင်းများသို့ လှည့်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗျူဟာများကို ကြံဖန်ကြံဖန်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နောက်လိုက်များထံမှ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ရှာဖွေရန် အရေးကြီးပါသည်။
အကယ်. သင်က YouTube မှတ်ချက်များကိုဝယ်ယူပါ YTpals ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ၊ သင်သည် သင့်ချန်နယ်၏ အောင်မြင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ YouTube မှတ်ချက်များ ဝယ်ယူခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
1. သင့်ဗီဒီယိုများ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို မြှင့်တင်ပါ။
ကြည့်ရှုသူများထံမှ အသိအမှတ်ပြုမှုအချို့ရရှိပြီးမှသာ YouTube ၏ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူသောအခါ၊ သင့်ဗီဒီယိုကို အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်ခြေ တိုးလာပါသည်။ YouTube တွင် အောင်မြင်လိုပါက သင့်ဗီဒီယိုများသည် စာရင်းသွင်းသူများ၊ လိုက်ခ်များနှင့် မှတ်ချက်များ အလုံအလောက်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်းသည် မှတ်ချက်များပိုမိုရရှိစေပြီး ကြည့်ရှုမှုများနှင့် လိုက်ခ်များပိုမိုရရှိစေသောကြောင့် အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင့်ဗီဒီယိုများသည် YouTube နာမည်ကြီးများရရှိသည့် မှတ်ချက်ပမာဏနှင့် တူညီနိုင်သော်လည်း YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူသူများသည် ကြည့်ရှုသူများ၏အမြင်တွင် သင့်ချန်နယ်ကို အသိအမှတ်ပြုမှုကို တိုးမြင့်လာစေပါသည်။
2. သင့် YouTube ချန်နယ်၏ အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပါ။
YouTube တွင်၊ ချန်နယ်များ၏အဆင့်ကို အများအားဖြင့် ချန်နယ်ရှိစာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ စာရင်းသွင်းသူသည် ဗီဒီယိုတစ်ခုစီရှိ မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်ခ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လိုက်ခ်များနှင့် မှတ်ချက်များ တိုးလာခြင်းကြောင့် YouTube ပေါ်ရှိ ချန်နယ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အချိုးကျ တိုးလာစေသည်။ ၎င်းသည် YouTube ချန်နယ်တစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက် မှတ်ချက်များသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူသောအခါ စာရင်းသွင်းသူများ ပိုမိုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် သင့်ချန်နယ်၏ အဆင့်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။
3. သင့်ဗီဒီယိုများကို ဗိုင်းရပ်ဖြစ်စေပါ။
YouTuber တိုင်းသည် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာကို ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့စေရန် လိုလားသော်လည်း ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ဖော်မြူလာမရှိပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းအရာကို ဖန်တီးရန်၊ ဖန်တီးသူတစ်ဦးသည် ဗီဒီယိုတစ်ဝိုက်တွင် လူကြိုက်များမှုဖန်တီးရန် ကွဲပြားသော ကြားခံများပေါ်တွင် ကြော်ငြာရန် အချိန်များစွာပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရန် သေချာသည့်နည်းလမ်းမရှိသော်လည်း၊ YouTube မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သေချာပေါက် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် သင့်ဗီဒီယိုကို လူများစွာအတွက် မီးမောင်းထိုးပြပါမည်။ သင့်ဗီဒီယိုများကို ကလစ်နှိပ်သူ ပိုများလာသည်နှင့်အမျှ မှတ်ချက်များ ဆက်တိုက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်ကဏ္ဍသည် ချန်နယ်ကို စာရင်းမသွင်းမီတွင်ပင် ကြည့်ရှုသူများကြည့်ရှုသည့် ပထမဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်းဖြင့် အထင်ကြီးလောက်သော မှတ်ချက်ကဏ္ဍတစ်ခုရှိခြင်းက ကြည့်ရှုသူများကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
4. ကလစ်များနှင့် လိုက်ခ်များ ပိုမိုရယူပါ။
သင့်ချန်နယ်ကို YouTube တွင် လူကြိုက်များလာစေလိုပါက ၎င်းသည် ကလစ်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်ခ်များ ပိုမိုရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် လူများရရှိစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှည်လျားပြီး ပျင်းစရာကောင်းသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဓာတ်ကူပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိသည်။ သင့်ကျော်ကြားမှုကို စတင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ YouTube ပေါ်ရှိ မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် သင့်ဗီဒီယိုကို လူများစွာက ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုမှုများနှင့် လိုက်ခ်များ အလိုအလျောက် တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်ဗီဒီယိုများရှိ မှတ်ချက်အများအပြားသည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ၎င်းတို့ကို ပေါ်ထွက်နိုင်ခြေကို တိုးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
5. စာရင်းသွင်းသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ပါ။
YouTube ၏ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူများနှင့် စာရင်းသွင်းသူများဖြစ်သည်။ သင်၏ ဗျူဟာများအားလုံးသည် သင့်ချန်နယ်သို့ ကြည့်ရှုသူများ ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် အဆုံးစွန်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင့်ချန်နယ်တွင် ကြည့်ရှုသူနှင့် စာရင်းသွင်းသူ အရေအတွက် ပိုများလေ၊ ကြည့်ရှုသူများ ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လေဟု လူသိများသော အချက်ဖြစ်သည်။ သင့်ဗီဒီယိုများရှိ မှတ်ချက်အရေအတွက်သည် သင်အဆုံးသတ်မည့် ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ YTpals ထံမှ မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်းသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး သင့်အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။ သင့်ချန်နယ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ချန်နယ်တွင်ရှိပြီးသား မှတ်ချက်အရေအတွက်ကို မှတ်သားထားသောကြောင့် စာရင်းသွင်းသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6. လူမှုရေးအထောက်အထားဖန်တီးရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကတွင် ဆိုရှယ်အထောက်အထားသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လူများသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရပ်တည်မှုအချို့ရှိသော ချန်နယ်များကို အများအားဖြင့် ဂရုပြုလေ့ရှိကြောင်း လူသိများသောအချက်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူ အများအပြားသည် အယူအဆ သို့မဟုတ် သင့် YouTube ချန်နယ်ကို ဖြန့်ကျက်သည့် အယူအဆကို ယုံကြည်သောအခါ၊ ကြည့်ရှုသူအသစ်များသည် အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်သေပြချက်ကြောင့် ဤကြည့်ရှုသူအသစ်များသည် ချန်နယ်သို့ ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုကို တိုးချဲ့လိုကြသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားဖန်တီးရန် YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်နိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် သင့်ဗီဒီယိုများရှိ မှတ်ချက်များကို မြင်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အကြောင်းအရာကို ပိုမိုကြည့်ရှုရန် စိတ်ဝင်စားလာမည်ဖြစ်သည်။
7. အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များကို တိမ်မြုပ်စေပါ။
ရံဖန်ရံခါတွင်၊ လူများသည် အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော YouTube ဗီဒီယိုများတွင် အပျက်သဘောဆောင်ပြီး အမုန်းပွားစေသော မှတ်ချက်များစွာကို ပို့စ်တင်တတ်ကြသည်။ ရန်လိုမှုနှင့် မလိုမုန်းထားမှုများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လူအများအပြားသည် YouTube ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤနေရာတွင် YouTube မှတ်ချက်များဝယ်ယူခြင်းသည် အဆင်ပြေပါသည်။ ဤမှတ်ချက်များကို သင်အစီရင်ခံနိုင်သော်လည်း၊ ဆူညံသံများကို တိမ်မြုပ်စေမည့် အခြားနည်းဗျူဟာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူသောအခါတွင်၊ အပြုသဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များသည် သင့်ဗီဒီယိုများကို ရေရှည်တွင်ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဤအဆိုးမြင်မှတ်ချက်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်း သေချာစေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အင်တာနက် မှင်စာများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ဗျူဟာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မုန်းတီးဖွယ်ရာ မှတ်ချက်များမှ ကျေနပ်မှုကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
8. ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သြဇာအာဏာကို ဖန်တီးပါ။
YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူသောအခါ၊ သင့်ဗီဒီယိုသည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဗီဒီယိုများကို လူများစတင်ကြည့်ရှုလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် သင့်အား နေရာလွတ်ပေါ်တွင် သင့်အနေအထားကို ချဲ့ထွင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက် ပိုများလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်မှာ လိုက်ခ်များများ၊ မှတ်ချက်များများနှင့် စာရင်းသွင်းသူများ ပိုများလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင့်ဗီဒီယိုများတွင် စာရင်းသွင်းသူများနှင့် မှတ်ချက်များ ပိုများလာသဖြင့်၊ သင့်အကြောင်းအရာကို စာရင်းသွင်းရန်နှင့် မှတ်ချက်များတင်ရန် နောက်ထပ်ကြည့်ရှုသူများကိုလည်း တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ဝန်းသည် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် အချိန်တိုအတွင်း အမြင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သင်သည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သြဇာအာဏာအချို့ကို ကျင့်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် YouTube မှ ငွေရှာခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိစေရုံသာမကဘဲ သြဇာအာဏာသည် မိတ်ဖက်အသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရာတွင် ကူညီပေးပါမည်။
9. မှတ်ချက်များနှင့် အမြင်များ အချိုးကျ တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် ယခင်က YTpals မှ YouTube ကြည့်ရှုမှုများကို ဝယ်ယူပါက၊ YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည်လည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ လူတွေက သင့်ချန်နယ်ကို ကြည့်တဲ့အခါ၊ တစ်ချို့က မှတ်ချက်တချို့ ချန်ထားခဲ့ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ကြည့်ရှုမှုများနှင့် မှတ်ချက်များကြားအချိုးသည် ကြီးမားသောအနားသတ်ဖြင့် ပိတ်နေပါက သင့်ချန်နယ်တွင် ကောင်းစွာထင်ဟပ်နေမည်မဟုတ်ပေ။ သင့်ဗီဒီယိုတွင် ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်နှင့် ကိုက်ညီသော YouTube မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ဤအခြေအနေကို ကုစားနိုင်ပါသည်။ သင့်ကြည့်ရှုမှုများနှင့် မှတ်ချက်များသည် ပိုမိုစစ်မှန်သည်နှင့်အမျှ၊ လူအများသည် သင့်ချန်နယ်ကို လိုက်ကြည့်ရန်နှင့် ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်များနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကို ချန်ထားခဲ့ရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
10. သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် လမ်းကြောင်းများ ပိုမိုရယူပါ။
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဝဘ်ဆိုက်သို့ အသွားအလာများလာစေရန် သင်၏ YouTube ချန်နယ်၏ အောင်မြင်မှုကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ YTpals ကဲ့သို့သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်တစ်ခုမှ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် သင်ပိုမိုနှစ်သက်မှု၊ ကြည့်ရှုမှုများနှင့် စာရင်းသွင်းသူများ ပိုမိုရရှိစေမည့် ပေးဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စာရင်းသွင်းသူအခြေခံ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ၊ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လမ်းကြောင်းအသွားအလာမြှင့်တင်ရန် ဆိုက်ပေါ်ရှိ သင့်သြဇာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ YouTube ချန်နယ်သည် သင်ထုတ်လုပ်သည့် အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကို စိတ်ဝင်စားသူများ ပစ်မှတ်ထားရန် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်များကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အထက်ဖော်ပြပါ ဗျူဟာများမှ၊ YouTube အာကာသအတွင်း မှတ်ချက်များ မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပလပ်ဖောင်းတွင် အသစ်ဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးရန် ရုန်းကန်နေပါက၊ YTpals ၏ Buy YouTube Comments ဝန်ဆောင်မှုမှ သင် အကျိုးခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ YTpals ကဲ့သို့သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရင်းအမြစ်မှ YouTube မှတ်ချက်များကို သင်ဝယ်ယူသောအခါတွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါ အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးကို သင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ YTpals သည် သင့်ဗီဒီယိုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် စစ်မှန်သော မှတ်ချက်များ ရေးသားသည်။ သင့်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များ တင်သွင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။ အော်ဒါတင်ပြီး 24-72 နာရီအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုစတင်မည်ဖြစ်ပြီး မှတ်ချက်များသည် ရက်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။